E-6012-TE2 Umatshini wokupompoza umbhobho wamanzi nge-Automatic pump-ESM-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
South Africa Xhosa E-6012-TE2 Umatshini wokupompoza umbhobho wamanzi nge-Automatic pump
Uchungechunge loMashishini: 12axis (E-6012)
I-axis e-6 (E-1206), i-axis ye-8 (E-8008), i-axis eyi-10 (E-7010), i-axis eyi-16 (E-4516).
 Inkcazo yokuveliswa kwendlela ebonakalayo, indlela elula kwaye ethembekileyo, ehambelanayo nefanelekileyo, ukulungelelanisa iimpawu zendawo yokusebenza ezichanekileyo, ezichanekileyo;
 Olu luhlu lomatshini osebenzayo usebenzisa inguqu yakutshanje ye-ESM yophando kunye nophuhliso lwesofthiwe yomshini ophezulu, uthinte isikrini kwenkqubo yangempela-time, usebenziso olusebenzayo lomsebenzisi ekufundiseni, incoko yokuzikhethela isiNgesi, ukulula kunye nokulula; umsebenzi wokugcina iphasiwedi, ukuthintela abantu abangavunyelwanga ukuguqula inkqubo, ukusebenza kakuhle, ukulungiswa okulula, iimpazamo ezingaphantsi;
 Olu luchungechunge lomatshini kunye nenkqubo yokutya okuzenzekelayo, inkqubo yokucoca ngokuzenzekelayo, inkqubo yokujonga ngokuzenzekelayo, inokuqulunqa umgca wokuvelisa ngokuzenzekelayo;
Ukuguqula amandla okuguqula i-transformer, i-EE transformer, i-EI transformer, i-coil, inductance, ABS, kunye nemveliso ekhethekileyo.
Isixhobo somnyango wokukhusela (P), ukulayisha nokukhupha idivayisi (L), idivayisi yokutshintshela ngokuthe tye (L-1), isixhobo socingo (T), izixhobo zesikhephe ngokuzenzekelayo (C), isixhobo sokucima (S), isixhobo sokusika ngokuzenzekelayo (Q) .
E-6012-TE2 Automatinė vandens siurblio ritės apvijų mašina |